musha United Kingdom Vatapi venhau Richard Kuda Mwana WeChidiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Richard Quest's Biography inoratidza Chokwadi paChidiki cheKecheche Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Chokwadi chemhuri, Rudo Hupenyu (Ngochani Chokwadi, Wife, Musikana Musikana), Vana, Net Kukosha, Mararamiro, uye Hupenyu Hwega.
Nemashoko akareruka, chinyorwa chedu chinokupa ruzivo rwakadzama nezvenyaya yehupenyu hwake, kubva pamazuva ake ekutanga kusvika paakava nemukurumbira muJournalism.
Ehe, iwe neni tinoziva nezve kuputika kwesimba rake repfungwa, agileness, uye yakasarudzika maitiro ekusimbisa.
Nekudaro, vashoma chete ndivo vakatora nguva yekuverenga Richard Quest's Biography, iyo ine hungwaru chaizvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatiise mavhiri mukufamba.
Richard Kutsvaga Kwehucheche Nyaya.
Kune ekutanga bio, iyo CNN International Anchor ine zita rekuti 'Marmite Munhu'. Richard Austin Quest akazvarwa pazuva re9th raKurume 1962 muguta reLiverpool, Merseyside, England.
Mutori wenhau wechirungu mumwe wevana vana vakazvarwa mumubatanidzwa pakati paamai nababa vake, avo vasinganyanyo zivikanwa nezvake.
Mhuri yaRichard Quest Kubva:
Kana iwe uchifunga kuti iye nyika yeUS nekuti anoshanda neCNN, saka une chokwadi chisiri icho. Waizviziva… Vabereki vaRichard Quest havasi veBritish zvachose.
Chokwadi ndechekuti, iyo CNN Bhizinesi Edhita ine madzitateguru echiJuda. Kune mamwe marekodhi asingachinjiki anoratidza kuti baba vake vakachinja zita remhuri kuti rive Quest mugore ra1948.
Makore eKukura aRichard Quest:
Waizviziva here kuti mutori wenhau weBritish CNN akakurira muLiverpool pamwe chete nehanzvadzi nhatu? mumwe wavo munin'ina wake mapatya anoenda nezita rekuti Caroline (ehe, iwe verenga izvo chaizvo! Quest ine mapatya).
Kukura kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweEngland, Quest aingova mwana mudiki paakadanana nenhepfenyuro yeJenali. Kare kumashure, aigara achimuka mangwanani nechinangwa chekuteerera Morning Meyerside paRadio radio.
Mukomana wacho paakanga achiri kudaro, akafadzwa nepfungwa yeruzha rwaifamba nomumhepo shoma richienda kune chinotambira redhiyo.
Nhoroondo Yemhuri yaRichard Quest:
Iye wekuBritain CNN murume haabvi kubva kuimba yakapfuma asi imba izere nepfungwa dzinodzidzisa.
Mhuri yaQuest yakadzidza-yepakati-yemhuri yaive yakakura pakuzvichengeta ivo pachavo nezviitiko munyika nekuverenga mapepanhau anosanganisira iyo Daily Express.
Muchokwadi, rimwe izwi raigona kunyatsotsanangura imba yaQuest raive 'Daily Express mhuri'.
Dzidzo yaRichard Quest:
Kana Daily Express payakaenda panhepfenyuro, mhuri yakatendeukira kuThe Daily Telegraph uye kuda kwaRudo rwekutepfenyura utori venhau kwakangosimba nemakore. Akachengeta kuda kuri kurarama panguva yekudzidza kwake kuhurongwa hwakazara Roundhay Chikoro muLeeds.
Paakapedza kudzidza, vabereki vaRichard Quest vakaita kuti aende kunodzidza kuAiredale neWharfedale koreji. Zviyedzo zvakazotevera zvedzidzo zvakaona mutambi wenhepfenyuro achienderera mberi nekudzidza mutemo paYunivhesiti yeLeeds muna 1983.
Asati arapa degree iri, Richard akaenda kuYunivhesiti yeVanderbilt muNashville, Tennessee pachirongwa chekuchinjana. Ikoko, akaita zvakanaka.
Richard Quest Biography - Makore Ekutanga mu Broadcast Nhau:
Yaive panguva yechirongwa chekuchinjana kuti ramangwana CNN anchor rakatora danho rake rekutanga rakakosha mukushambadzira kutapa nhau.
Kuda kwake kwakamuona achiva mutungamiriri wenhau weyunivhesiti kambasi redhiyo WRVU. Muchokwadi, akaita zvakanaka kubatsira kuvaka Campus Radio's yekuzivisa vashandi kubva pakutanga!
CNN Bhizinesi Edhita akawana degree rake reMutemo mu1993 uye akadaidzwa kubhawa. Nekudaro, akasarudza kuvaka basa mukutepfenyura.
Kusvikira izvozvi, akazove mutori wenhau aidzidziswa paBBC muna 1985 uye aive pachinzvimbo chevashandi vechikamu chezvemari cheBBC muna 1987.
Richard Quest's Bio - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nyaya:
Achikwira pamanera ebudiriro yebasa, mutori wenhau anosimuka akanyorerwa kuUnited States of America, kwaakaitwa kuti ashande semutori wenhau webhizinesi weBBC's News 24 chiteshi.
Kutamisirwa kwaive pasina kupokana shanduko yebasa raQuest sezvo zvakamuunza padhuze nekushanda neAmerican nhau-yakavakirwa pay terevhizheni chiteshi - CNN.
Vanoona zvakanaka vekare veBBC's News 24 chiteshi vaisazove nechinetso kurangarira Chido chakasimba chekukurukura musika wepasi rose wemisika naPaddy O'Connell muchikamu chenguva dzose chinozivikanwa seWorld Business Report pakati pa2: 00 mangwanani na3: 00 am (GMT).
Asides kubva mukuzivisa, mutori wenhau ari kusimuka aive anogara achiratidzira chirongwa cheBBC mangwanani-ngwanani Bhizinesi reKudya kwemangwanani.
Richard Kutsvaga Biography - Iyo Kumuka Kune Mukurumbira Nhau:
2001 yaive gore iro Bhizinesi rekufamba rakazopedzisira rabatana neCNN. Richard akatanga kubatsira American yekuburitsa nhau kumhanya yavo Bhizinesi International iro raive chirongwa chitsva panguva iyoyo. Kubva ipapo, akafukidza akasiyana zviitiko zvakasiyana zveCNN.
Nekukurumidza kumberi kwaChikunguru 2020, Quest yakashanda nzira yake kumusoro kuti ive CNN Bhizinesi Edhira paGuru. Iye anoita zvakare anchor chirongwa chebhizinesi - Kutsvaga Kunoreva Bhizinesi uye anotungamira CNN 'Bhizinesi Mufambi.'
Chero ipi nhungamiro yezvinhu zvinotorera iye mune ramangwana, vamwe vese, sezvavanotaura, ichagara iri nhoroondo.
Richard Kuda Gay Mudiwa ndiani?
Kunge CNN's Don Lemon, vazhinji havana kumboziva hutano hwake kusvikira abuda muwadhiropu muna Gumiguru 2018, panguva yekushanya kuKenya.
Mwedzi mishoma gare gare muna Chivabvu 2019, Quest yakatora kune yake Instagram peji kugovana nhau dzekubatanidzwa kwake kune mudiwa wake ngochani Chris Pepesterny.
Hazvina zvakawanda zvinozivikanwa nezvaChris Pepesterny asi isu tinoziva kuti shiri dzerudo dzaifanirwa kuroora muna Chivabvu 2020. Zvisinei, vaifanira kudzokorodza nekuda kwechiitiko checorronavirus denda. Zvinogona kunge zvisiri kutora nguva refu vaviri vasati varoora.
Richard Kutsvaga Hupenyu Hwemhuri:
Mazhinji maGreat TV anchor zvigadzirwa zvedzimba dzimba uye iyo CNN Bhizinesi anchor haisi yakasarudzika.
Pano, isu tinokuunzira chokwadi nezvevabereki vaRichard Quest, hama nehama. Pasina imwezve ado, ngatitorei bhora kutenderera.
Nezve Vabereki vaRichard Quest:
Waizviziva here?… Baba vaAnchor vanozivikanwa zvishoma vaive gweta rakazove chiremba. Kune rimwe divi, zvinyorwa zvidiki zviripo nezvaamai vaRichard Quest.
Chinhu chimwe, zvisinei, ndechechokwadi. Zviripachena kuti vabereki vaRichard Quest vakaita zvakanaka mukumupa iye kurera kwemhando yepamusoro. Ane ndangariro dzinofadza pamusoro pavo uye anoita zvaanoita kuti avadadise.
Nezve hama dzaRichard Quest:
Sezvatakatarisa kare, murume akakurumbira weCNN akakurira pamwe nehanzvadzi nhatu. Nekudaro, isu tinongoziva nezve munin'ina wake mapatya anoenda nezita rekuti Caroline.
Akasarudza kutsika nzira yemudzidzi uye akazove director webhizimusi nekusimudzira bhizinesi kuBritish University yeLeicester.
About Hama dzaRichard Quest:
Vanofanira kunge varipo uye pamwe muUK. Kure nevabereki vaRichard Quest uye vanun'una, hapana zvakawanda zvinozivikanwa nezvemadzitateguru ake kunyanya zvine chekuita nasekuru nasekuru nasekuru, vanatete nana babamunini, pamwe nevazukuru, vazukuru nevazukuru.
Richard Kutsvaga Hupenyu Hwega:
Kusvika pakuziva hunhu hwake kubva paCNN skrini zvaizokubatsira iwe kuwana mufananidzo uri nani wake. Paunenge uchimuziva, pamwe wakabvunza?… Ndiani Quest ari seri kwekunyemwerera kukuru uye nechido chekushamisira chaanoratidza paTV?
Mumwe mubvunzo pahupenyu hwaRichard Quest ndeuyu unoti… Iwe uchangosvika panguva yekuwana chokwadi nezvehunhu hwake, hwakafanana nehwevanhu vane chiratidzo cheZodiac Pisces.
Chokwadi ndechekuti, Richard Kutsvaga anonakidza, anodziya, anovaraidza, emanzwiro, anodakadza uye akavhurika kuzarura chokwadi pamusoro pehupenyu hwake hwepachivande uye hwepamoyo.
Chero nguva iyo anchor yeTV painenge isinga shande anowanikwa achiedza kuramba akagwinya, kufamba, kuverenga pakati pezvimwe zvinofarira uye zvekuvaraidza. Tinoda kutaura here kuti anoda kambani ine rudo yemhuri neshamwari? Isu tinofungidzira zviri pachena.
Richard Kutsvaga Mararamiro:
Nezve mashandisiro anoita TV anchor uye kushandisa mari yake, unoziva here kuti ane mambure akakosha emadhora mana mamirioni kubva muna Chikunguru 4?
Mibairo neMihoro iyo yaanowana kubva kuna Jobho paCNN Zvinozivikanwa masosi ehupfumi hwake ukuwo masosi asinganyanyo kuzivikanwa achitora mafomu ezvemari nemari.
Nekudaro, zvingave zviri nyore kuti Richard adadise mota nedzimba sevaimbi vemimhanzi nevatambi. Nekudaro, akasarudza kurarama mararamiro ekuchengetedza izvo zvinoita kuti zviome kunyatsootevedzera mashandisiro ake emashandisirwo emari.
Richard Kutsvaga Chokwadi:
Kuputira nyaya yaRichard Quest yehucheche uye biography, hezvino zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezve TV anchor.
Chokwadi # 1- Richard Achada Join Al Jazeera?
Wanga uchiziva here kuti Quest haina kusvetukira pamukana wekushandira Aljazeera Chirungu nhau chiteshi muna 2006?
Chikumbiro ichi chaiyedza asi Quest yaifanira kuramba "nechikonzero chekuti ngochani nemuJuda zvinogona kunge zvisina kukodzera".
Chokwadi # 2- Chitendero chei chinonzi naRichard Kuda Kuitisa?
Chekutanga uye chekutanga, haasi Mukristu. Kutsvaga aive nechitendero chekurerwa kwechiJuda icho chiri chinzvimbo chake kusvika nhasi.
Kunyangwe iyo TV anchor isingachateedzere kune zvirambidzo zvekudya, iye achiri kunzwa muJuda zvakadaro uye angagara achida kuziva semuJudha.
Chokwadi # 3- Richard Kuda Akapora Kubva kuCorona Virus?
2020 raive gore rinotyisa kune vanoverengeka vane mukurumbira vekuAmerican vakaedza neCoronavirus. Saiye waaishanda naye weCNN - Chris Cuomo, Richard Quest akaedzwa aine hutachiona zvakare asi nerombo rakanaka akapora.
Chokwadi # 4 - NdiRichard Anotsvaga Munyori:
Mutori wenhau munyori ane bhuku rimwe chete kuchikwereti chake. Musoro webhuku uyu - Kuparara kweNdege MH370: Iyo Yechokwadi Nyaya yeHunt yeiyo Yakarasika yeMalasian Ndege. Ehe, iwe unofungidzira kurudyi, Quest yakanyatso kufukidza iyo nyaya, nekudaro sarudzo yake yekunyora bhuku nezve zviitiko.
Chokwadi # 5 - Trivia:
Waizviziva here kuti John F. Kennedy aive purezidhendi weUnited States pakaberekwa Richard Quest muna 1962? Vaimbi vakaita seThe Beatles naBob Dylan vaive vachiri vakakurumbira muna 1962 nepo firimu rekare - Kuuraya Mockingbird rakarova mabhaisikopo gore rimwe chetero.
Shandisa tafura iri pazasi kuti ukurumidze uye yakapfupika ruzivo nezvaRichard Kuda.
Zita rizere Richard Austin Kuda
Nickname Marmite Munhu
Zuva rekuzvarwa 9th musi waMarch 1962
Nzvimbo yekuzvarirwa Guta reLiverpool muMerseyside, England
Profession mutapi wenhau
Vanun'una Caroline (Twin Sista).
mudiwa Chris Pepesterny.
zvinhu Kushanda kunze, kufamba uye kuverenga.
dzidzo state yakazara Roundhay Chikoro muLeeds, Airedale uye Wharfedale koreji uye University of Leeds.
Pakati peshanduro zhinji dzeRichard Quest's Biographies, tinokutendai nekumira neyedu. Pasina kupokana, kuda kwake kwehudiki kwakazoshanduka kuita basa rake uye nhasi, rake basa rashanduka kuita hobho yake.
Ndichiri kuisa ichi chinyorwa paHupenyu Hupenyu hwaRichard Quest, vapepeti vedu vakaita napose pavaigona napo kuti vave nechokwadi nekururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka pane yedu Yekunyora kunyora, ndapota usazeze kuisa chirevo mubhokisi riri pazasi.